Bollywood Park & ​​Resorts | N'ezie ebe di egwu iji gaa na Dubai
bipụtara Ụlọ ọrụ Dubai City at Nwere ike 26, 2019
Gaa na ogige ntụrụndụ a raara nye Bollywood, na Dubai: Bollywood Parks & Resorts
Kedu ihe mere ị ga-eji gaa Bollywood Parks na Dubai?
Bollywood Park & Resorts in Dubai, Think India na ị na-eche banyere abụ, mmemme & agba dị iche iche. Yabụ mgbe ị chere maka Bollywood, enwere ọtụtụ masalas, mba bollywood zuru ezu na-enweghị ngwakọta nke mmetụta uche na-atọ ụtọ na egwu na egwu dị cherry na achicha, ụfọdụ n'ime ha nwere obi ụtọ nke na ị gaghị akwụsị ụkwụ gị. si tapping na uzo ka ụda na uda.
ana m ala ikwu banyere ahụmịhe ahụ Anọ m na ogige ntụrụndụ bollywood na ntụrụndụ n'izu a. Ọ bụ ụbọchị juru ụbọchị na otu okwu “Dhamakedar” (uche na-egbu egbu, mara mma) dịka ha na-akpọ na Bollywood.
Ga - atụ ụjọ site na mgbe ị banyere n’ime Riverland, nnukwu ntinye maka ogige ntụrụndụ ise na ebe ntụrụndụ niile dị ebe ahụ ị ga-ahụkwa omenala dị iche iche na-abịa dị ndụ n’ebe a. There is soothing music all along, even during summers you will not feel hot wind gushing through, you’ll feel this ebe has some kind of open Air Conditioning system instead and that’s delightful…
Bollywood agba-idobe ịma mma!
Na-abịa na ntinye nke ogige ntụrụndụ Bollywood, Enwere mma-jawasị mara mma na anya mbụ, (lelee Instagram m maka nke ahụ). Enwere akwa eserese peacock nke na-anọchi anya India. Mgbe ha na-abanye n'ime, enwere nnukwu enugwu abụọ buru ibu nke ejiri ọyị mara mma chọọ mma, na-eduga na Jumbo Cafe, nke a na-apụghị ikwenye ekwenye?
Ozugbo ebe a, ị ga-emetụta ya Indianzọ ndụ ndị India, ebe ị nwere agba maka ememme ọ bụla, egwu maka mmetụta niile, ụdị ịgba egwu maka ọnọdụ ọ bụla & ọmarịcha n’okporo ụzọ ahụ.
Nwee ntụpọ, ọ bụrụ n’abatabeghị ebe a n'ihi ịnye ọnụahịa, biko enweghi asambodo, zuta tiketi gi & la Nyocha !!! The Akara ngosi ihe nkiri a bụ a dum paisa isool, ị ga-echeta fim ahụ niile ebe ahụ… Na-agba ọsọ nkiri nkiri, enwere njem na-atọ ụtọ nke ga-echetara gị nke ụlọ akwụkwọ ụbọchị gị Video egwuregwu arcades.
Abụ m akụkụ nke dị ndụ anwansi nke ime ihe nkiri, na otu n'ime ndị ọkacha mmasị m, Zindagi Na Milegi Dobara, n'eziokwu, o juru m anya ịmata etu mmetụta niile si arụ, ụda ọfụma na-eme na sinima, m gbara di m aka maka ọrụ egwuregwu na ahụmịhe . (Enwere vidiyo na profaịlụ m). N'ụzọ, ị ga-ahụ ya Ogige Victoria, nke bu cafe ha dika Mumbai VT na Aamchi Mumbai na ụgbọ oloko mpaghara.
Anyị banyeziri na igwe eji eme ihe eji eme rollercoaster simulator ride Lagaan, kachasị nke ndị a na-agba agba nọ na Krishh… ebe ị na-ada site na mkpọda ugwu, na-eche na a na-adọta gị down by the cyclone & torrential ifufe in the Simulated ride.
Bollywood na Dubai nwere egwuregwu ndụ!
Abia na ndụ egwu, Nke kacha dịpụrụiche bụ Akpata N'ezie, ihe na-esoghị egwu ịgba egwu na-enweghị nkwụsị na isiokwu nke Girlsmụ nwanyị Dream nke bollywood. E nwere ụdị egwu Dhol dị iche iche site n'akụkụ dị iche iche India na ọ bụ na-atụ egwu! N'ihi ihu igwe dị ọkụ, a na-eme ihe ndị a niile n'ime Rajmahal, ma ọ bụghị ya, egwu na egwu a niile na-eme na Bollywood Boulevard.
Anyị kwụsịrị ụbọchị anyị Iftar akụrụngwa na Mughl-e-azam cafe na ebe ahụ dị ịrịba ama mara mma.
Ahụmahụ: 5 / 5
Akwụ ụgwọ: ngwugwu amalite AED 89 gaa n'ihu, Ridesị maka AED 10, enwere onyinye dị iche iche dịnụ na weebụsaịtị ha site n'oge ruo n'oge.
Nri: 5 / 5
Na-agba ọsọ: 4.5 / 5
Aro maka njem:
-eyi uwe dị mma na akpụkpọ ụkwụ.
Buru kristal anwụ, okpu & ugogbe anya maka anwụ.
Inwere ike idetu tiketi gị n'ịntanetị zere kwụ n'ahịrị ma ọ bụ bụrụ na ọgba aghara, a na-erekwa tiketi na tebulu.
Iji nweta nlegharị anya na nyocha vidiyo, gaa na profaịlụ m Instagram na njikọ dị n'okpuru.
Ụlọ ọrụ Dubai City na-enye ugbu a ezigbo ntuziaka maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ọrụ na Dubai eduzi. Yabụ, site na nke a n'uche, ị nwere ike nweta ugbu a nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates ya na asusu gi.